Isikhathi Sokushintsha Amasu Okumaketha Nge-imeyili lapho ... | Martech Zone
Ama-imeyili akho abukeka kanjena:
Mhlawumbe umugqa wesihloko uphoqelela futhi wenze kube ngokwakho esikhundleni se- "ChangeThis: Issue 46"
Mhlawumbe eminye imigqa iyaqhekeka ukuze kungadingeki ngisonge njengoba ngangiyifunda (angizange ngiyifunde, kwakungenakwenzeka).
Mhlawumbe ama-imeyili we-Multi-part MIME ukuthumela umbhalo kulabo abafuna ukubukeka okusobala, kepha i-HTML kulabo bethu abajabulela i-imeyili eyakhiwe kahle.
Mhlawumbe isingeniso esicindezelayo?
Mhlawumbe isikhala esithile esimhlophe phakathi kwezihloko ukwenza kube lula ukuskena?
Mhlawumbe izihloko zokugqamisa izihloko ezahlukahlukene futhi uzihlukanise nezincazelo?
Mhlawumbe uhlu olunamachashazi nezixhumanisi nolwazi oluhlotshaniswa nolunye?
Mhlawumbe uhlu lwezixhumanisi ezijwayelekile ezibuyela kuwebhusayithi?
Mhlawumbe okuhlukile Umhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili uma eyakho kunzima ukuyisebenzisa?
Ingxenye esabekayo lapha ukuthi ShintshaLokhuumugqa ngu:
I-ChangeThis idala uhlobo olusha lwemidiya. Uhlobo lwezindaba olusebenzisa amathuluzi akhona (njengama-PDF, amabhulogi kanye newebhu) ukuphonsela inselelo indlela imibono edalwa futhi esakazeka ngayo.
Kuyinhlangano enhle enezinto eziningi zokusiza ushintsho kubaholi nakosomabhizinisi. Kubi kakhulu ukuthi bakhetha ukungayinaki indlela eyodwa yokuxhumana engigcina ngibuyele kwiwebhusayithi yabo.
5 / 8 / 2008: Noma ngibhalisile, ngithole le imeyili namuhla. Awuqinisekile ukuthi kungenzeka kwenzekeni kepha kube intuthuko enkulu:
Tags: uhlu olunamachashazishintsha lokhuizixhumanisi ezivamileimeyiliukufometha i-imeyiliizihlokoisingenisoulayini unqamukalinksmimemulti-okuyingxenye mimeiphephandabaumugqa wesihlokoisikhala esimhlophe
May 8, 2008 ku-9: 17 AM
Mhlawumbe uyishaya ekhanda. Okuthunyelwe okuhle nezeluleko ezinhle.
May 8, 2008 ku-10: 30 AM
May 9, 2008 ku-10: 17 PM
Engikuthandayo kulapho iklayenti livikela i- “Issue46” yalo kulayini wesihloko futhi linenombolo ngayinye yokukhishwa kulayini wesihloko. Ngempela ngezwa omunye ethi, "Kungenxa yokuthi ababhalisile bethu bahlele ama-imeyili afakwe kungobo yomlando kwiklayenti labo le-imeyili."
Uyadlala? Ungikhokhela imali enkulu ukukutshela ukuthi ungavula kanjani kangcono futhi uchofoze amanani kodwa awuzimisele ukusondela kulayini wesihloko? Sikufisela inhlanhla kulawo ma-metric… ..